သူရဿဝါနှင့် မဲဆိုမှမဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူရဿဝါနှင့် မဲဆိုမှမဲ
အဲဒီစာအုပ်ကိုတော့ မဝယ်ရေးချ မဝယ်ဘဲ ဗျို့ 
အရောင်းသွက်တဆယ်ထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက၀င်ချင်ရင်တော့ ရွာထဲက မားကက်တင်းဆရာတွေက ပညာနဲ့အခမဲ့ ပံ့ပိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ အော် ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးလိုက်ဖို့လဲ မမေ့နဲ့အုံးနော်။ ပညာရှင်ကြေးပေါ့။
ခယ်မလေး အဆစ်ရရင်တော့ဝယ်မယ်….ဟွန်. ;)
ယမမင်းနဲ. နာလို.က ရွှေညိုးတွေလေ …..ငိငိ…..
ယောက္ခမကိုချစ်ပုံရတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကိုဝယ်ဖတ်ဦးမှ ကော်ဖီမစ်လေးများပေါက်မလားလို့။
အဲဒီယောက္ခမအိုကြီးကိုပြုစုဖို့ ခယ်မလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် အထူးဆုကြီးပေါက်အောင် အုပ်တစ်ထောင်လောက်ဝယ်အားပေးလိုက်ပါ့မယ် သရော်စာက၀်ိပညာရှိကိုရဲလိုးရဲလိုးရေ……….